सुशान्तसँग दुरुस्तै अनुहार मिल्ने डुप्लिकेट, पाए यति ठूलाे उपहार – Sanchar Patrika
भारतीय क्रिकेटका पूर्व कप्तान महेन्द्र सिंह धोनीको फिल्ममा धोनीका भूमिकामा अभिनय गरेका बलिउडका चर्चित अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको जीवनीमा बन्ने फिल्ममा कसले अभिनय गर्ला ? सुशान्तकै जस्तै दुरुस्तै अनुहार मिल्ने सचिन तिवारीले फिल्ममा अभिनय गर्ने पक्का भएको छ ।
सुसा इड और म र्ड रु नाम राखिएको फिल्ममा सचिनले अभिनय छन् भने फिल्म सेप्टेम्बरपछि मात्रै छायांकन गर्ने तयारी गरिएको छ । सुशान्तले मुम्बईको बान्द्रास्थित आफ्नै घरको फेनमा पा सो लगाएर आफ्नै ज्या न फा लेपछि थप चर्चामा आए ।
मृ त्युपछि पनि चर्चामा रहेका यि लोकप्रिय कलाकारको मृ त्युको मुख्य कारण नेपोटिज्म भएको भन्ने विषयले भारतमा चर्को ब हषको रुप धा रण गरेको छ । अहिले पनि चर्चित अभिनेता सुशान्तकाे निकै चर्चा रहेकाे छ । उनका फ्यानले अझै पनि उनी प्रति निकै माया मर्मता रहेकाे बताएका छन् ।
Prevसासुलाई हरेक दिन ‘बिष’ खुवाउने बुहारी
Nextछिट्टै स्कुल खुल्दै, अब स्कुल खोल्दा यस्ता नियम पालना गर्नुपर्ने ! साउन १५ गतेदेखि विद्यालयका शिक्षकलाई अनिवार्य रुपमा विद्यालय पुग्नैपर्ने
दुबैमा नेपाली ले नेपाली लाई नै काम लगाइदिने भन्दै नक्कली अफर लेटर दिएर पैसा खाएर गाएब । प्रमाण सहित हेर्नुहोस ।
ऋषिपञ्चमीका अवसरमा नुहाउन गएका तीन बालिका बाग्मतीमा बेपत्ता